Shabaab oo degaan kala wareegay Ciidanka kenya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Shabaab oo degaan kala wareegay Ciidanka kenya
Tuuryare 2 March 2019 2 March 2019
Sidda ay sheegeen Al-Shabaab waxa ay guud ahaan la wareegeen degaanka Fafaxdhuun oo Ciidanka dowladda Kenya ay gacanta ku haayeen Sanooyinkii ugu dambeeyay.
Degaanka Fafaxdhuun ayaa ku yaalla gobolka Gedo, waxaana shabaab ay sheegtay in ay degaankaasi ka qabsadeen Ciidanka Kenya haddana ay ku wajan yihiin degaano kale.
la Wareegitaanka ayaa yimid ka dib markii Ciidanka Kenya ay ka baxeen degaankaasi oo ay Sanado badan gacanta ku haayeen.
Sidoo kale Shabaab waxa ay sheegeen inay baaris ku sameeyeen dhamaan Saldhigyadii ay ka baxeen Ciidamada Kenya, islamarkaana ay ka baareen in miinooyin halkaasi ay ku aaseen Ciidamadii baneeyay Saldhigyadaasi.
AMISOM hands over top military academy to Somalia
Qarax xoogan oo ka dhacay Baladweyne